PSJTV | नेपालबाट एक डलर पनि विदेश लगेको छैन : डा. महतो
काठमाडौं : गैरअवासीय नेपाली संघ (एनआरन)का पूर्वअध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले विदेशमा लुकाउनका लागि नेपालबाट एक डलर पनि नलगेको बताएका छन्।
खोज पत्रकारिता केन्द्रले केही दिनअघि नेपालिक्स नाम दिँदै विदेशमा अवैध रुपमा अर्बौं रकम लुकाउने नेपालीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजतिक सूचीमा आफ्नो पनि नाम जोडिएपछि उनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले विदेशमा गरेकै कमाइ विदेशमा लगानी गरेको बताएका हुन्।
उनले आफू मुलरूपमा व्यापार-व्यवसायमा संलग्न रहेकाले नेपालबाहेक विभिन्न देशमा आफ्नो व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा लगानी रहनु सामान्य हुने बताए। उनले भने, 'मूलतः व्यापार–व्यवसायमा संलग्न रहेको हुँदा नेपालबाहेक विभिन्न देशमा मेरा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू र तदनुरूपका लगानी थिए र अझै पनि छन्।'
उनले नेपालिक्सको खुलासामा भनिए झैँ आफूले नेपालको रकम विदेशमा नलगी विदेशमा कमाइ गरेको पैसा नेपाल भित्र्याएको दाबी गरेका छन्। उनले आफूले नेपालमा गरेको लगानी पनि विदेशबाटै ल्याएको भन्दै थप लगानी भित्र्याउन पनि दृढ संकल्प र समर्पित रहेको बताएका छन्।
'मैले नेपालमा गरेको लगानी पनि विदेशबाटै ल्याएको हुँ र अझै ल्याउने दृढ संकल्प र समर्पणका साथ काम गरिरहेको छु' उनले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनले आफू लामो समयदेखि विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी मातृभूमिमा ल्याउने काममा सक्रिय रहेको समेत बताए।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पछिल्लो ठेक्का निर्णयमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको पाइएको छ। आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले छाडेर गएको बाँकी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिँदा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा ...